पाल्पामा दाहसंस्कार गरिएका व्यक्ति जीवित भेटिएपछि… – Sanchar Patrika
July 12, 2020 191
पाल्पामा मृ त भनी दाहसं स्कार गरिएका व्यक्ति जीवित भेटिएका छन् । गुल्मी जिल्ला रुरु गाउँपालिका¬ ५ बम्गाका ६५ वर्षीय श्यामशरण भण्डारी पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–१ अर्चलेमा जीवित अव स्थामा भेटिएको रिडीमा बसोबास गर्दै आएका चुरामणि तिमिल्सिनाले बताए।
गुल्मी निवासी भण्डारी हाल रुपन्देही जिल्लाको मणिग्राममा सपरिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । श्यामशरण घरमा पु¥याउँदा परिवार र आफन्तहरुको भीडभाड थियो । केही दिनअघि रुरु गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकी नदी क्षेत्रमा पुरुषको ला स भे टिएको थियो । पुरुषको ला सलाई श्यामशरण लास भनी आफन्तले दाह सं स्कार गरेको आफन्तले जनाएका छन् ।
किरिया बसेको नौ दिनमा जी वित भेटिएपछि आफन्तहरु खुशी देखिएका छन् । पाल्पाका अर्चलेका भीष्मा पन्तले श्यामशरण जीवित भेटिएको जानकारी तिमिल्सिनालाई जानकारी गराउनु दिएका हुन् । उनी घर फर्किएपछि कि रिया बसेका परिवारजन र आफन्तजन चकित परेका छन् ।
उनी २५ दिनदेखि बेपत्ता थिए । उनकी पत्नी र छोरा रूपन्देहीको मणिग्राममा बस्दै आएका छन् । उनी ह राएपछि आफन्तजले खोजी गरेका थिए । उनीहरूले वडा कार्यालय र प्रहरीलाई पनि ह राएको जानकारी दिएका थिए । १९ असारमा रुरु गाउँपालिकाको ब म्घा र रिमुवानजिक ब डि गा ड नदीमा एक पुरुषको श व भेटिएको थियो । शरीरमा लुगा नभएकाले पहिचान गर्न सकिएको थिएन । श्यामशरण हराएकाले प्रहरीले उनको परिवारलाई खबर गर्‍यो ।
श वसँग उनका धेरै कुरा मिलेका परिवार र आफन्तजनले स्वीकार गरेको छिमेकी धाता पाण्डेयले बताए । ‘उनी जस्तै थिए, त्यसैले परिवार र सिंगो गाउँलेले नै श्यामशरण नै भनेका हुन्,’ पाण्डेयले भने । परिवार र गाउँलेले स्वीकारेपछि प्रहरीले पनि मुचुल्का उठायो । त्यही दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरेनीमा श वको पो स्टमा र्टम गरियो ।
‘शनिबार साँझ ६ बजेतिर उनको घर पुग्दा मान्छेको भिडभाड थियो । श्यामशरणलाई देख्ने बित्तिककै त्यहाँ भएका मान्छे मात्रै होइन, परिवारजन पनि झस्किए
२० असारमा परिवार र छिमेकीले रुद्रवेणी घा टमा दा हसं स्कार पनि गरे र काजकिरियामा बसे । किरिया बसेको नवौँ दिन शनिबार बिहान ८ बजेतिर पाल्पाको रैनादेवी गाउँपालिका–१ अर्चलेमा श्यामशरण जीवित फे ला परेको भन्ने फोन आउँदा भने परिवारजन मात्रै होइन, गाउँले पनि झस्किए ।
किरिया गरिरहेका श्यामशरण जीवित घर फर्किएपछि अचम्म लागेको उनका आफन्त विष्णु भण्डारीले सुनाए । ‘सानोबुबा जीवित आएकाले अच म्मित भएका छौँ । अर्कैको दाहसं स्कार गरिएकाले तना वमा पनि छौँ,’ उनले भने ।
Prevनयाँ पेट्रोल पम्पका लागि आवेदन दिएकाहरुले लाइसेन्स नपाउने
Nextरवि लामिछाने प्रदेश एक पुगेर खाली खुट्टै यसरी खटे काममा [भि,डियो सहित]
मिर्गौला संवेदनशील अंग हो, कसरी जोगाउने ?
राम जन्मभूमि नेपाली अयोध्याबारे अनुसन्धान सुरु, के साँच्चिकै राम नेपालमा नै जन्मेका हुन् त ?
के भयो फेरि चितवनमा हेर्नुहोस, भाग्य न्यौपाने चितवन पुगे (भिडियो)